Hacaaluun ni ajjeeefame. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHacaaluun ni ajjeeefame.
Hacaaluun ni ajjeeefame. Kan ajjeesses diina Hacaaluun dhuunfaan godhate osoo hin taane, diina qabsoo Oromoo hundaatiini. Ajjeefameellee haqa dhabee jira.
Ajjechaan Hacaaluu kunis, siyaasaaf itti fayyadamamee jira. Namoota qabsoo oromoo keessatti gahee olaanaa qabaniifi hooggana ummatichaa tahan funaananii hidhuunis dhugaadhas, ifaan ifatti daba gara mootummaatiin jiru agarsiisuu qofa osoo hin taane, ajjeechaa isaas ilaslchisee kallattii muldhisu qaba. Jaalannees jibbinees kuni dhugaadha. Dhugaa dhalootaa gara dhalootaatti darbu. Namuu haguuguu hin dandahu.
Gara biraatiin ammoo, ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa ‘wareegama qaalii qabsoo oromoorratti godhame ‘ jedhamee ibsuu mannaa ‘ du’a’ jedhamee ibsuun kunuu daba. Shira. Adeemsa HAQA Hacaaluu dhoysuuf ykn irra dibuuf godhamu keessaa isa tokko. Du’a jedhee ibsuuf warri dhimmamee dhama’aa jiruus qaama yakka secondary ajjeefamuu Hacaaluu irratti godheen ibsama. Jechi biraa hin jiraatu.
Kanaafuu ibsi KFOn ajjeechaa Hacaaluu ilaalchisee baase kuni, inumaa yoo waa irraa hirdhise malee sobni itti dabalame hin jiru, dhugaa irratti kan hundaaye. Warra dhugaa tana dhagahuuf sodaatu bira rakkoon kan jiru!!
Abdulgafar Umer Kedir
ትናንት ITunes ላይ የተለቀቀው የሀጫሉ Ilma Nama(የሰው ልጅ) የሚለው ዘፈኑን ላዳመጠ ሰው ሀጬ ምን ያህል ርህሩህና እውነተኛ ሰው እንደነበረ በቀላሉ ይረዳል:: ባጭሩ Ilma Nama(የሰው ልጅ) የሚለው ዘፈኑ ስለ የቲሞችና ስለ ቀድር ነው የሚናገረው:: እናትና አባታቸውን በሞት ያጡት ልጆች( የቲሞች) በ ቀድር ምክንያት ብሆንም የቲሞችንም መርዳትና መንከባከብ የዜጎች መሆን እንዳለበት በዘፈኑ ይገልፅልናል:: እሱና ቤተሰቡን ከገጠመው ሀዘን ጋር ሳስታውሰው ልቤ ክፉኛ ይደማል:: ቢያንስ ቤተሰቡ እንዳይቸገር አንድ ቋሚ መተዳደሪያ ተቋም በስሙ እንዲቋቋም ለሱ ቅርብ የሆኑትና የሚመለከታቸው አካል ቢያስቡበት ጥሩ ነው::
Jirrakaa jirra jirra akka mukaatti soofamnee
Baraan akka horitti hoofamnee
Abjuu sobaa abjoonnee!
Osoo jirruu akka hin
Akka nama biyya hin qabne
Biyya keenya irratti tuffatamnee
Ofumaa nu ajjeesanii
Ofiif Wal ajjeestan jedhanii
Siyaasa Shira nutti xaxanii
Imaanaa nu haalanii
Sobaan nutti dhaadatan!!
Hacee Koo jirra jette akkatti jirruu
Waaqaa fii lafatu beekaa
Fala dhabne faloo eenyu nuu akeeka!!
Gumaa baasna malee gumaa hin nyaannu
Haqa hacaaluu hundumtuu haa barbaannu
Hacee ati hin boqatte malee hin duune
Rakkoo fi gidiraa oromoo arguurra duuti bilisummaadha!!
Albamii hacee Amma hojjete kana cd isaa akka bitannuu ergaa kooti.
Nagaan boqadhu hacee Koo.
Dhugaan galgala galti.
Beenishaangul Gumuzitti Araarri Bufne Jedha Mootummaan! Hidhattoonnoo Maal jedhu?